Hoyga | Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare
Liiska ardeydii ku guuleysatay deeqihii waxbarasho ee Yemen iyo Suudaan
Ardey u fariistay imtixaanka deeqda waxbarashada dibedda
Wasiirka Tacliinta Sare oo dhagax dhigay dhismaha Caafimaadka ee Jaamacadda SIMAD
Wasaaraddu waxay mas’uul ka tahay dajinta iyo hirgelinta siyaasadaha qaranka ee la xiriira tacliinta sare, hiddaha iyo dhaqanka iyo cilmi-baarista.
Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare waxaa markii ugu horreysay la aasaasay sanadkii 1974kii si loo horumariyo tacliinta sare ee Soomaaliyeed oo markaasi hana-qaadeysay, inkastoo xilligaasi ay dalka ka jirtay hal jaamacad oo kaliya, taasoo illaa iyo xad gacan ka geysatay baahidii waxbarashada sare ee dalka.
Hase yeeshee, Jaamacaddii Ummadda waxay ku burburtay dagaalladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Laakiin sanado kaddib dad ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa u istaagay inay aasaasaan goobo waxbarasho oo ay ka mid yihiin jaamacado si loo buuxiyo kaalintii ay banneysay Jaamacaddii Ummadda. Xilligan la joogo waxaa la qiyaasaa in 50kun oo arday ay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaalla gobollada kala duwan ee dalka.
Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare taageereysaa, isla markaana nidaamineysaa sidii ay Shacabka Soomaaliyeed u heli lahaayeen tacliin sare oo tayo leh. Waxay sidoo kale ilaalineysaa, isla markaana sare u qaadeysaa dhaqanka iyo hiddaha dalka.
Tacliinta Sare waxay ka qeybqaadan kartaa horumarinta mustaqbalka Soomaaliya maadaama ay ka qeyb qaadan karto horumarka dhaqan-dhaqaale ee qaranka. Sidaasi darteed, waxay Wasaaraddu dajisay qorshayaal shacabka lagu baahinayo tacliin sare oo tayo leh, isla markaana aad u jaban.